imithi yesimanje ephatha adenoids ngezindlela ezimbili: ngoludala futhi kuhlinzwa. Ukukhetha izimali olandelanayo namuhla Nokho, ngokwanele ezinkulu, ochwepheshe abaningi bakhetha aphathe adenoids ku eziyinkimbinkimbi. Ngenxa yale njongo, amavithamini, immunostimulants, vasoconstrictor, eqeda ukuvuvukala futhi anti-histamines. Omunye zindlela kuyinto spray "Nazoneks" adenoids uma isetshenziswa nge eneminyaka emibili.
Yini umsebenzi okuvikela umzimba?
Sekukonke, umzimba womuntu amalaka eziyisithupha, kokuba itholakala nasopharynx, bakha okuthiwa indandatho Pirogov. Lokhu kumiswa kudlala indima zokuzivikela, le amygdala ayivumeli ukutheleleka ukuze engena ijule umzimba. Ukuze ikhale Pirogov kukhona pharyngeal, lingual, ezimbili-pipe kanye ezimbili amalaka LasePalatine. Lingual isifo futhi amalaka esibeletho kubantu ezingajwayelekile kakhulu, ngokuvamile abathintekayo, futhi pharyngeal amalaka. Proliferation futhi hypertrophy ka amalaka pharyngeal libizwa adenoids.
I overgrowth ezivame kakhulu LasePalatine futhi amalaka pharyngeal ezinganeni kungenxa yokuthi lezi iziphathimandla kukhona kuqala kuthathe ekuhlaseleni namagciwane abangela izifo nama-virus. Adenoides zenzeka emzimbeni wengane njengoba umsebenzi zokuzivikela, ekuvimbeleni kwenqubo yokwakhiwa kwamakoloni amabhaktheriya nasopharynx futhi oropharynx pathogenic. Ngesikhathi ukwephulwa okufanayo ukuphefumula acinene, rhinitis isikhathi eside, izwi acinene kuyizimpawu we adenoids. Singagwinyi neziyaluyalu, snoring, izwi ingezwakali izimpawu hypertrophy ka amalaka.
Indlela yokusebenzisa lesi sidakamizwa "Nasonex" e adenoids?
Ekwelapheni adenoids nethonya elihle akunike antihistamine, ama-hormone nemithi evuselela mzimba. Njengoba ukukhula amalaka - ngokuyinhloko yokusabela ukuzivikela umzimba, kungenzeka ukusebenzisa ngempumelelo lesi sidakamizwa "Nasonex" e adenoids. Isetshenziselwa efomini amaconsi acinene noma ephefumula kanye nsuku zonke izingane kusukela eminyakeni emibili. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwelashwa nale izidakamizwa e-80% izingane kuba nomphumela eqinile omuhle, okuyinto eyenzeka ngosuku ukwelashwa "Nasonex" yesibili.
"Nasonex" - isilungiselela eziyinkimbinkimbi egxile ekunciphiseni isimo iguliswa futhi kunciphisa hypertrophy izicubu, futhi aqede ukulunywa futhi ukuncinza ku ekhaleni. Ukulungiswa kufaka umthamo elincane hormone, kodwa kungenzeka ukuba usebenzise noma izingane, njengoba nje iye umthelela wendawo kuphela. Active izidakamizwa mometasone, ingxenye izidakamizwa kuvimbela ukuthuthukiswa ukuvuvukala iphinde ivimbele nezibazi endaweni ukuvuvukala. Yingakho iconsi "Nasonex" asetshenziswa ngempumelelo e adenoids acute, sinusitis, futhi vasomotor rhinitis. Umuthi unekhono ukumisa hhayi kuphela ekuseni izinqubo umzimba uxabane nawo, kodwa isetshenziswa ngokuphumelelayo ezimweni ezinzima.
Ukusebenzisa ukulungiselela "Nasonex" e adenoids, ungakhohlwa ukuthi unakho Izimo. Lezi zihlanganisa:
Heavy ubovu izinqubo ingaphakathi acinene, ngokungabi bikho ukwelashwa ngemithi elwa namagciwane.
Fresh noma ukuhlukumezeka ukuhlinzwa ekhaleni.
isifo sofuba yamaphaphu, izifo ezibangelwa amagciwane kanye fungal kwekhala, amehlo nge-herpes izilonda.
Hypersensitivity izingxenye izidakamizwa.
Izingane ezingaphansi kweminyaka emibili.
Ukukhulelwa ukuncelisa ingane. (Ngezinye izikhathi, kulesi simo, "Nasonex" lisetshenziswa on kadokotela kadokotela).
Acinene lehla "Nazoneks" - buyindlela ephumelelayo ukuthi isetshenziswa ukwelapha adenoids kanye nezifo ezingamahlala khona we nasopharynx. Akufanele nje khohlwa ukuthi ingasetshenziswa iyiphi enye injongo udokotela ukuba khona.
Ubuthi 4: ndima. "Ukufunda Ijika" (BOS)
"Maritime-Galatea" Kirillovka. Kirillovka: ukuzilibazisa. "Maritime-Galatea": isithombe
Ungathola kanjani umninikhaya?